Ambanja – Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
Missions et Objectifs du Ministère
Directions et Services Rattachés du MINAE
Site des Institutions
08 Martsa 2014 (EASTA- PRO Ambanja)
« Ecole d’Application des Sciences et Technique Agricoles et Promotion Rural Ambanja »
Ny Sabotsy 08 Martsa 2014, dia nankalazaina teto Ambanja ny andron’ny vehivavy aty eto amin’ny faritra DIANA, izay ivondronan’ny Distrika efatra: Diego, Ambilobe, Nosy be, Ambanja. Nanombohana io fankalazana io ny filaharam-be narahina dihy mirindra izay niainga teo amin’ny EPP Begavo ka niafara tao amin’ny Stade Ambanja. TOHINY
Fivoahan’ny Mpianatrin’ny EASTA-PRO
Izahay mpianatrin’ny EASTA-PRO eto Ambanja dia nivoaka nakany Ankily ny 29 Mars 2014, izay notarihin’ny Ramatoa Talen’ny Sekoly sy ny mpiara-miasa aminy vitsivitsy. Ny tanjona tamin’izany moa dia ny fijerena ny karazamboly izay misy amin’iny faritra iny. TOHINY
Tsy zovina amin’ny mponin’i AMBANJA AVARATRA ny Ekipan’ny EASTA PRO AMBANJA raha eo amin’ny fisômana laboly no horesahina.Anisan’ny Ekipa mafy sy atahorana hahazo ny amboara amin’izao “Coupe 26” izao ,TOHINY
Eto Madagasikara, rah any fijery ankapobeny no amaritana ny hoe “Mpanao fanatanjahan-tena” dia anisan’ny loha laharana ny Mpisoma laboly. TOHINY
Vao tonga teto Antsakoamanondro AMBANJA izahay ny volana Febroary 2014 dia nahatsapa fa tsy ampy fialam-boly ny tanora tety.TOHINY
Données pluviométriques satellitaires
Rapport d’évaluation de la situation CLA
Plan d’action gestion CLA
© 2018 Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage